Tajaajila Faayinaansii Investimentii Waliinii Irratti Hundaa’e - Oromia International Bank
Tajaajila Faayinaansii Musharakaah
Tajaajilli faayinaansii ‘musharakaah’ kun bu’uura waliigaltee baankii fi maamilli dursanii taasisaniin qaamoleen lameenuu ykn baankii fi maamilli dhibbentaa kaaphitaala isaaniitiin hojii shariikummaadhaan investimentii hojjetamudha.
Hojiilee seera sheriyaatiin heeyyamame qofaa irratti hirmaata.
Bu’aan argamu kan qoodamu bu’uura waliigaltee dursaniin godhaniin(mallatteessaniin)dhibbentaa itti waliigalaniin ta’a.
Kisaaraan immii dhibbentaa kaaphitaappitaala walitti buusaniin ta’a.
Hojii dhaabbataa waloo kana keessatti baankii fi maamilli dhimmi hojii ilaalchisee kallattiinis ta’e al-kallattiin murtee keessatti hirmaachuuf mirga qabu.
Baankiin shariikummaa hanga dhumaatti hin qabaatu abbummaa shariika isaatiif dabarsaa (gurguraa) kan deemu ta’a.
Tajaajila ifaa fi saffisaa ta’e hojjettoota baankichaa irraa ni argatu.
Sadarkaa invetimentichi irra ga’e yeroo yeroon madaaluu fi xiinxaluu ni danda’u.